Maraykanka oo Hambalyo u diray Somalia, Kana digay in la hor istaago Guulaha Somalia. – Hornafrik Media Network
Maraykanka oo Hambalyo u diray Somalia, Kana digay in la hor istaago Guulaha Somalia.
By HornAfrik	 Last updated Jul 1, 2017
Safiirka dawladda Maraykanka wuxuu hambalyo u diray dadka Somalia munaasabadda 1-da July ee xornimada iyo Aasaaaka Qaranka Somalia.
Safiirka wuxuu ka hadlay Beesha caalamka waxa ay Somalia ka qabto , waxyaabaha la sugayo Dawladda Somalia in ay qabato. Safiirka wuxuu sheegay sanadka uu joogo inuu ka marqaati kacayo horumarka dib udhiska aan caadiga aheyn ee ay Somalia sameysay , horumarkaa waxaa qatar geliyey Abaaraha/Macluusha, Weerarada Alshabaab, canshuur aruurinta dawladda xadidan, Cadaaladda dalka (Maxkamadaha) oo baaba’ ah iyo waxyaabo kale.
Safiirka wuxuu sheegay in Madaxweyne Farmaajo iyo Raisul Wasaare Kheyre ay dhab ka yahay in Somalia ka saaraan xaaladda ay ku jirto, keenaana nabad, iyo dib u heshiisiin,
safiirka wuxuu sheegay dawladiisa iyo in badan oo kamid ah Beesha caalamka inay si dhow ula shaqeynayaan Dawladda Federalka, Maamul goboleedyadii jiray iyo kuwa hadda sameysmaya.
Safiirka wuxuu sheegay in iyadda oo la wada shaqeynayo laga hortagay in Macluul dhacdo inkastoo abaar daran dhacday, lagu heshiiyey qaabka amniga Qaranka, dib u habeynta iyo xoojinta hayadaha amniga , ciidamada ka saarida iyo soo celinta amniga caasimadda Muqdisho. Inkastoo horumarka waqtiga gaaban muhiim yahay haddana horumar iyo nabad waarta si loo helo soomaaliya waxey sameynaysaa isku day dhab ah oo sanado badan qaata taasoo u baahan dhamaan taageerada soomaalida iyo beesha caalamka, horumarka waa inaysan caqabad u dhigin shacabka iyo kooxo ka macaasha maamul la’aanta iyo danbiyadda , kuwaa oo ka baqaya Ku dhaqanka sharciga iyo isla xisaabtanka. Si dawladda Somalia u guuleysato , Xukuumadda iyo sharci dejinta ba waa inay dhinac iska dhigaan qalqal siyaasadeed, awoodoodana geliyaan sidii horumar dhab ah looga gaari lahaa waxyaabaha muhiimka ah oo horyaala , kuwaas oo kala ah:- ka adkaanta argagixisada, iyo dib u dhiska hayaddaha amniga, abuuridda daqliga gudaha iyo fulinta la wadaagida daqliga iyo qeyraadka dawlad goboleedyadda * Dhameystirka Dastuurka iyo ansixintiisa, diyaarinta doorasho hal cod hal qof) * horumarinta dib u heshiisiinta oo ay ku jirto wadahadal Somaliland.* Ansixinta sharciyadda muhiimka ah oo ay kamidka yihiin isgaarsiinta, la dagaalanka musuq maasuqa iyo kuwa kale) Hawlaha yaala waa badan yihiin balse waase la dhameystiri karaa.
Waxaa cad dhibaatada Somalia oo soo socotay 30 sano ka badan ma ahan kuwa ku dhamaanaya sanad iyo 4 sano balse tiirarka guusha waa in la bilaabaa ka hor 2021. Arintaanina waxay u baahan tahay degenaasho inta aan kawada shaqeynayo danaha waqtiga dheer ee Somalia. Sidoo kale arintaan waxay u baahan tahay shacabka Somalida iney foojignaadaan lana xisaabtamaan dawladda iyo baarlamaanka inay ilaaliyaan danaha shacabka.
Dawladda Maraykanka waxay ku faraxsantahay xiriirka sii koraya oo Somalia kala dhaxeeya, waxaana ka go’an in ay la shaqeeyaan dhamaan Soomaalida doonaysa inay dhisaan Somalia Democratic ah, nabad ah, loo dhan yahay oo noqota qaran horumarsan.
Alshabaab oo sheegtay inay Caawa Sarkaal ku dileen Muqdisho.